Fa maninona no very ny famirapiratan'ny hoditra mandritra ny taona? | Bezzia
Fa maninona no very ny famirapiratan'ny hoditra mandritra ny taona?
Bezzia | | beauty, Vokatra hatsaran-tarehy
Mijere fitaratra dia jereo ny fomba very ny famirapiratan'ny hodintsika nandritra ny taona maro mamoy fo isika. Mametraka amin'ny tenantsika io fanontaniana io ihany isika: Fa maninona no very fahazavana mandritra ny fotoana? Ary izany ve misy lafin-javatra maro izay mitaona ny fahaverezan'ny hazavana, iray amin'izany ny antitra. Ny fahanterana dia misy akony eo ambonin'ny hoditra sy ny sosona rehetra mandrafitra azy.
Ireo dingana amin'ny fahanterana Manomboka amin'ny fiovana lehibe amin'ny hoditra sy ny metabolisma izy ireo. Voalohany ny fisehoan'ny ketrona manodidina ny masontsika, ny tongotry ny goaika malaza, ary, taty aoriana, misy ketrona manodidina ny vava, na ny fehezan-dalàna malaza. Saingy, ankoatr'izay, tsikaritra ihany koa fa ny hoditra very ny famirapiratany miadana.
Ny lafiny roa toy ny malefaka sy ny taratra dia tsy azo tazonina maharitra, satria novaina ny hydration, fanavaozana ny sela ary ny famokarana melanin, ka very ny famirapiratany.
fa tsy ny fahanterana ihany no mahatonga azy ny fahaverezan'ny hamirapiratry ny hoditsika, raha tsy ny tsy fahampian'ny torimaso, ny sakafo ratsy na ny sakafo, ny paraky sy ny loto dia antony sasany mahatonga ny hodintsika ho lasa maivana ary tsy misy hazavana.
1 Ireo anton-javatra anatiny izay manova ny fisehoan'ny tarehintsika
2 Mamitaka hanana hoditra manjelanjelatra
2.1 Fitsaboana fanalefahana
2.2 Mampiasà crème Resveratrol
2.3 Tandremo ny sakafonao ary ampitomboy ny sakafo misy vitamina C
2.4 Mampiasà sarontava misy asidra hyaluronic
Ireo anton-javatra anatiny izay manova ny fisehoan'ny tarehintsika
Na izany aza, misy antony roa ao anatiny koa izay manova ny fisehoan'ny tarehin'ny hoditsika:
La famokarana melanine be loatra ary ny metabolisma malemy. Miaraka amin'izy ireo dia misy teboka sy tsy fanarahan-dalàna mipoitra amin'ny hoditsika.
La nihena microcirculation ao amin'ny soson'ny dermis. Ny fiasa kely eo amin'ny hoditra dia miteraka tarehy mena volo.
Saingy tsy izany no faran'ny tontolo, soa ihany be dia be ny fitsaboana sy ny tetika manome ny taratray hamerina izany fa very nandritra ny taona maro isika.
Manaraka izany, dia hasehontsika izay izy ireo.
Mamitaka hanana hoditra manjelanjelatra
Raha te-hanatsara ny endrika, ny fahamendrehana ary ny famirapiratan'ny hoditrao ianao, redensification Ny safidy tsara indrindra. Dia a fitsaboana fanavaozana tarehy vaovao tsy misy fandidiana. Mifantoka amin'ny fanitsiana sy fisorohana ny fahanteran'ny hoditra, mampihetsika ny asan'ny sela hoditra.
Mampiasà crème Resveratrol
Raha tsy mahazo hazavana amin'ny hoditrao ianao, ary maniry ny taratranao hanome taratra ny mazava voajanahary, safidy tena tsara izany mampiasa kosmetika misy resveratrol. Manala poizina, ary manakana ny fisehoan'ny teboka. Azonao atao ny manambatra ny crème resveratrol amin'ny fampiasana menaka sy serum tena mando tena isan'andro izay manome endrika voajanahary ny hoditrao.
Tandremo ny sakafonao ary ampitomboy ny sakafo misy vitamina C
Ilaina ny vitamina C hahatratra ny fahazavana eo amin'ny hodintsika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitandremantsika ny sakafontsika ao anatin'izany sakafo manankarena vitamin C toy ny voasary, epinara, dipoavatra, voaloboka, voankazo mena sns.
Halaviro ny paraky sy alikaola, satria izy ireo koa dia tompon'andraikitra mivantana amin'ny hoditra maro manana endrika maloka, miketrona ary reraka.
Mampiasà sarontava misy asidra hyaluronic
Ary io asidra hyaluronic io, tena tsara ho an'ny hodintsika io. Manome hydration, hazavana ary endrika vaovao amin'ny tarehy. Raha afangarointsika amin'ny hazelita mpamosavy izy io dia manamboatra, mampitony ary manome fahatsapana fampiononana. Ho an'ny fahombiazana bebe kokoa dia azonao atao ny mampiasa sarontava izay misy ireo akora ireo sy apetaho mangatsiaka.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy fotsiny mba hampamirapiratra ny hoditrao indray ary hamerina ilay famirapiratana very rehefa mandeha ny fotoana. Ny hoditra no sary mandrora amin'ny sakafo hohanintsika sy ny fahatsapantsika.
Karakarao ny hoditrao ary tandremo ny tenanao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fa maninona no very ny famirapiratan'ny hoditra mandritra ny taona?
Lasagna misy aubergine, holatra ary ovy nopotsehina gratin